Medicine "Ingoverin 90" uyinto entsha uma kuqhathaniswa entsha ososayensi Russian. Ukulungiswa kunomphumela evelele namagciwane. Kusho "Ingoverin" umsebenzi umkhuhlane virus (A / H1N1 nezinye ukulungiswa), Umkhuhlane B, parainfluenza, adenovirus futhi zokuphefumula syncytial virus ukutheleleka.
I asebenzayo izidakamizwa ingxenye - pentandiovoy imidazoliletanamid acid.
Umuthi 'Ingoverin 90 "imfundo evumela ukusebenzisa for ekwelapheni Umkhuhlane A no B kanye nezinye izifo sibi zokuphefumula kukhona egazini imvelaphi.
I nomuthi kukhishelwa elibomvu (noma oluhlaza okwesibhakabhaka) amaphilisi equkethe ubhuqu elimbudumbudu nge Valium omhlophe noma qwa.
Esibonisa imanuwali izidakamizwa "Ingoverin" imfundo kubonisa khona umsebenzi wakhe immunomodulating esekelwe okwandisa ukukhiqizwa interferon ngu leukocyte futhi, ngenxa yalokho, okwandisa yayo (interferon) plasma lokuhlala. Umuthi Akhuthaza ukwakheka kwe-killer nama-T cell (igciwane cell-ukubulala). Umuthi 'Ingoverin "(yokusetshenziswa ubhekisela kulo) ukusheshisa nokuvuthwa obusebenzayo neutrophil.
Umthelela eqeda ukuvuvukala zomuthi lihlotshaniswa nokucindezela tsitoksinov ukhiye, phansi umsebenzi mieloperiksidazy. Ngo Umkhuhlane nomphumela oqabulayo kuyinto kokunciphisa isikhathi febrile, kwehle ubuthi, esiqoshiwe ikhanda, isiyezi, ubuthakathaka ziqedwe, izimpawu catarrhal kanye kuncishiswe inani kanye nesikhathi yezinkinga isifo.
Ngokuhamba izifundo bathole ukuthi lesi sidakamizwa "Ingoverin" hhayi imiphumela umdlavuza noma mutagenic, akuphazamisi umsebenzi zokuzala. Umuthi akakwazi ukunikeza umphumela immunotoxic futhi allergenic, alinaso kuyacasula izakhiwo zendawo.
Zokungenisa wabonisa ukusatshalaliswa iyunifomu isithako esisebenzayo kwezitho nezicubu. Ngemuva kwemizuzu engu-amathathu ngemva nokuphathwa emakamu esiphezulu nasemkhakheni izindlela igazi. Excretion izidakamizwa wenziwa ifomu zinjalo.
Kusho "Ingoverin" imfundo manual uncoma zithathwe ngomlomo, ngaphandle kokubheka ukudla.
Umuthi kumele uqale ukuthatha kusukela izimpawu zokuqala zesifo, kungakapheli amahora amathathu nesithupha kuwo (isifo) ekuqaleni.
Umuthi ngokuvamile ezinqunyiwe ayisishiyagalolunye angu kanye ngosuku. Kuye kobukhulu isikhathi zokwelapha kungase kube into kusukela ezinsukwini eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa.
Engeziwe izigameko ezingezinhle ezavela ngesikhathi ukuthatha imithi "Ingoverin" imfundo manual ubiza komzimba. Prakthiza ebonisa ukuthi miphumela babonakala ezimweni ezingajwayelekile.
Musa akunikeze imithi iziguli cha attained engu-nesishiyagalombili, kanye banezimfanelo ukungabekezelelani ngazinye izingxenye.
Ngenxa yokuthi ukusetshenziswa imithi by kwabesifazane abakhulelwe kanye lactating ezingazange wafunda, it is hhayi Kunconywa ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Ingoverin" kulesi sigaba iziguli. Uma kudingeka, kusho ukuthatha ngesikhathi lactation yokudla imisiwe.
Nomuthi "Ingoverin" akanawo nomthelela ijubane lengqondo, okuhlushwa acuity ezibukwayo. Ngakho-ke, zonke izivimbelo mayelana nokusetshenziswa imithi kubantu ogama imisebenzi abhekwa yingozi, is hhayi kusungulwa.
Amacala izidakamizwa ukweqisa izidakamizwa "Ingoverin" abachazwa.
Amandla sokulungiselela "Ingoverin" ukuthuthukisa umsebenzi antitumor izidakamizwa cytostatic, ukunciphisa umphumela ezinobuthi of nomuthi "Cyclophosphamide".
Naphezu kweqiniso lokuthi izibuyekezo mayelana nemithi kokubili ochwepheshe kanye ezigulini ezimweni eziningi ezinhle, imithi kufanele kuvunyelwane nodokotela wakho.
"Kamaz 5490": ukubuyekezwa. "Kamaz 5490": izici, izithombe